Akkuma aadaa keenyaatti sirnaa waltajjii eebba manguddootiin erga eegallee booda akkasumas sirna yadannoo wareegamtootaaf daqiqaa tokko goonee jira. itti aansuudhaan gabaasa baatiiwwan darbanii obbo Harun Kalil manaaf dhiyyeesanii jiru. itti aansuudhaan obbo Mezgebu Demeke Boru waa'ee filannoo dhara wagoota digidamii shanaann darban kana kessatti mootummaan abbaa irreedhaa empayere ethiophia san keessatti rawatee fi akkasumas oromoo ta'uu qofaan yakkaa fi roorroo ilmaan Oromoo irratti rawataa jiru baruumsa bal'aa meseensoota keenyaa fi Hawaasa Oromoof kenanii jiru. akkasumas dabalataan Adde Sinknesh Temtme Mamo daaw'annaan obaamaa gara ethiopia saganteffame imaammata sirna dimokraasii faallessa jechuun barumsa bal'aa misensoota keenyaa fi Hawaasa Oromoof kenanii jiru. Nuuti tokkummaan baratoota oromoo biyya jarmanii yeroo ammaan kanaa mootummaa abbaa irree Impaayeera Itoophiyaatiin sochii, siyaasaa naannoo gaanfa Afrikaa fi Empayera Itiyoophiyaa keessatti deemaa jiru yoo ilaalle Oromoon akka sabaatti ammas hojiin manaa jajabduun akka fuundura keenya jirtu hubachuun nama hin dhibu. Oromoon humna taanu malee, haqa qabnu kan salphaatti namaaf fudhatu hin jiru. Oromoo humneessuu yeroo jedhamu dhaadannoo ykn jechaan namuu dubbachuu ni mala. Garuu hojii gaafata. Hojii lafaratti muldhatu. Fakkeessuu fi ololli ni jirra jedhu, diina nurraa hin salphisu. Faallaa kanaa ammas Oromiyaa fi ummata Oromoo, nama isaa otoo hin taane, qabeenyaa fi humna isaa qaamonni hawwan, ammas alaalaa amuummachaa fi dibbee waliif Rukuturra darbanii, Wayyaanee[TPLF] yeroo ammaa aangorra jiru hundeen buqqisuu irra, Oromoo laaffisuun akka adda duree ta’eefitti jira.
Amma dubbiin dubbii nama Falmataa fi Roorisaa jedhamuu miti. Dubbiin dubbii oromummaa fi Oromiyaa ti. Kana booda yeroon nuti Falmataa fi Rorisaan eessa jira jennee, wal gaafannu otoo hin taane, akka Oromootti eessa jirra jennee wal gaafannuu dha. Gaaffiin kun eega ka’ee yeroo dheeraa fudhatee jira. Ummati keenya akka sabaatti gaaffii kanaaf deebii gahaa kennee jira. Innis oromummaa fi tokkummaa kan jedhuu dha. Diinni keenya kan nugarboonfataa jiru maqaa Falmataa fi Rorisaa jedhu duwwaan otoo hin taane, Oromoo ta’uu keenya qofa. Diina biratti maqaa gara garaa fi kallattii gara garaatti dhalannus Oromoo ta’uu keenyaan garbooffamaa jirra. Kanaaf akka Oromootti dhaabbachuun murteessaa dha.
Hojii manaa keenya akka Oromootti hojachuu qabna yeroon jedhu dhaabbileen siyaasaa oromoo hundi dirreetti bahanii waltajjii tokko irratti waliin dubbachuu qabu. Waliin dubbannee wal dadhabne jecha jidhu gabaasuuf otoo hintaane, dhimma garee dhiisanii dhimma waloo irratti waliif galuu qabu. Hundi keenya Oromoo dha, Oromoof qabsoofna, gahee mataa keenyaa qabna, adeemsa qabsoo egeree sabaaf ta’uu irratti waliin dubbanna, aarsaa tokkummaan qabsa’otaa gaafatu kaffaluuf qophiidha, … Jedhamee waadaa seenuun bu’aa fida. Kanaaf hojiin manaa keenya inni guddaan mooraa qabsoo Oromoo tokkoomsuu dha. Kun salphaa miti. Garuu kan hin danda’amne miti. Rakkoo ilmi namaa uume ilmuma namaatu fala itti kenna. Kanaaf Oromoo humneessuudhaan hojii manaa keenya inni duraa tokkummaa dha haqaa irratti hundahe dhuguumsuu dha. Sochiin amma dhaabbilee siyaasaa biratti walitti siqanii rakkoo waloon jirtu, waloon fala itti barbaaduuf dhama’an jiran jabaatee itti fufuu qaba. Kanaaf nuti ilmaan oromoo harka walqabannee motummaa abbaa irree TPLF ykn sirna nama nyaataa kana hiddaan buqisuu qabna. Dhuma irratti dhalli oromoo du’uun, hidhamuun, biyya abbaa isaa irraa ari’uun, qabeenya isaa samuun, qe’ee irraa buqisuun nurratti dhaabachuu qaba. Kanaafuu diina keenya kanaa dura dhaabbachuuf hanga wareegama lubbuutti kennuuf qophii ta’uu qabna. Haaluma kanaa ibsa ejjannee keenya yeeroo mirkanesinu.
Uummatni Oromoo biyyaa alaa fi biyya keessa jirtan marri bakka jirtanitti mormii keessan haala qindaa’een akka dhageessiftan kabajaan isin gaafadha.
Jarmiyaaleen siyaasaa Oromoo kamiyyuu diina Oromoo dhabamsiisuuf ka’e dura dhaabbannee mirgaa fi dimokiraasii uummata Oromoo akka mirkaneessinu yaamicha oromummaa keenya dabarfana.
Dhalootaan Oromoo kan taatanii fi shira mootummaa abbaa irree kanaa kan hubattan ilmaan oromoo hundi kessan yeroon uummata keessaniif seenaa boonsaa hojjettan amma waan ta’eef qabsoo oromotti makamuun itti gaafatamummaa seenaa fi seeraa jalaa akka baatan isin yaadachiisuu fi dirqama oromummaa keessan akka baatan isin hubachiisa.
Ajjeechaa garaa hammeennaan barattoota Oromoo irratti raawwatameef hoggantoota mootummaa abbaa irreetiin ala qaamnii biraa itti gaafatamu akka hin jirre amanna. Ajjeechaan bara baraan dhala Oromoo irratti raawwatamu gocha fixiinsa sanyii Oromoo ta’uuti hubbanna. Hoggantootii mootummaan Itoophiyaa TPLFn durfamu Dhiiga ilmaan Oromoo jissuu irraa akka of-qusatan akkeekkachiifna.
Maqaa misooma qindomina qabuu fiduuf jechuudhaan tarsiisoo mootummaan abbaa irree lafa Oromoo ummata Oromoo irraa buqqisuudhaan deeggartootaa fi abbaa fedheef kennuuf maqaa Master Plan” jedhuun moggaase raawwii isaaf tattafachaa jiru cimsinee kan balaleeffannu ta’uu ibsina. Karoorrii kun akkuma ummata Oromoo biyya keessa jiruuf dhimmii kun kallatiin ilaalu biratti fudhatama hin qabne, nu Oromoota biyya ambaa jiraannu birattis akka fudhatama hin qabne ibsuu barbaanna. Mootummaan abbaa irree Impaayeera Itoophiyaa qondaaltoota siyaasaa isaa ajjeechaa ilmaan Oromoo keessatti kallatiin qooda qaban hatattamaan too’annoo jala oolanii gara seeraati akka dhiihatan akka godhu akkeekachiifna. Galmaan gahuu kaayyoo kanatiif dhaabbileen mirga dhala namaatiif falman hudumtuu mootummaa Itoophiyaa irratti akka dhiibbaa godhan gaafanna. Gochaan ummata Oromotiif ummattoota biroo Itoophiyaa Keessa jiran ukkamsuudhaaf mootummaan Itoophiyaan yeroo yerooti fudhatamaa jiru, fixiinsa sanyii namaa akka ta’e hubatamee qaamnii dhimmii Kun ilaalu qorannoo shakkamtoota yakka kanaa gara seeraati dhiheessuuf barbaachisu amumma akka eegalan gaafanna.
Galanni ilmaan Oromoo qabsoo mirgaa Oromootiif kufanii bilisummaa saba Oromootiif walabummaa Oromiyaa qofa akka ta’e hubbanna.
Tokkummaan baratoota oromoo biyya jarmanii keessa jiraannu qabsoo haqaa Oromoo keessatti ummata Oromoo biyya jiru cinaa jiraachuu keenna yeroon mirkaneessinu jecha armaan gadii kana jennee amanna.
wareegama qofaan bilisummaan dhufa!!